Jafer Ali | OromianEconomist
Finfinneen Handhuura Oromiyaa Taatullee Addis Ababaan Godaannisa Gabrummaati, Jafer Ali November 20, 2014
Posted by OromianEconomist in Africa, Amnesty International's Report: Because I Am Oromo, Daraartuu Abdataa, Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Afar, Ogaden, Sidama, Southern Ethiopia and the Omo Valley, Ethnic Cleansing, Finfinnee is the Capital City of Oromia, Finfinnee n Kan Oromoo ti, Groups at risk of arbitrary arrest in Oromia: Amnesty International Report, Jafer Ali, NO to the Evictions of Oromo Nationals from Finfinnee (Central Oromia), Oromia, Oromians Protests, Oromiyaa.
Tags: Africa, African Studies, Because I am Oromo, Economic and Social Freedom, Finfinnee, Genocide Against Oromo People, Genocide against the Oromo, Human rights violations, Jafer Ali, National Self Determination, Oromia, Oromiyaa, Oromo, Oromo people, Oromo Protests, Oromummaa
Finfinneen Handhuura Oromiyaa Taatullee Addis Ababaan Godaannisa Gabrummaati | Jafer Ali
Qabeenya uumaa hunda keeysaa bu’urri guddaanii fii fiinxeen lafa hoggaa tahu oromooniis qabeenya uumaan badhaafame keeysaa guddichi lafuma isaati.Lafti oromoo bal’ina isii caalaa gabbatuu fii ameeytii tahuu isiitiin beekkamti. Magariisa tahuu daran tan qabeenya bishaaniitiin badhaate tahuu isiitiin jaalatamti. Gubbaa isii qofa osoo hintahin keeysi isiitiis albuda garagaraatiin kan duroome akka tahe niamanama. Dur irraa jalqabee masaanuun ollaa weeraraaf ittiduuluuniis kanumaafi.
Bar dhibbee 19ffa keeysa eega biiyti oromoo kiyyoo Miniliik 2fa jala kufte irraa eegalee, lafti namaa wajjiin weerartoota habashaatiif hiramtee, abbaan biyyaa lafuma isaa irratti sirna gabbaar ja’amee beekkamuun ciisanyaa ykn hojjataa qonnaa tahuun yaadannoo jaarraa dabreeti.
Warraaqsa ummatoota Ethiopia kan bara 1974 irratti lafti tan qotee bulaa akka taatu labsamuun abbootii lafaa hiddaan buqqaasullee mootummaan dargii ifumaafuu abbaa lafaa haaraya itti tahuudhaan qoteebulaan ciisanyaa mootummaa malee abbaa lafaa akka hintahin shalaguun nama hindhibu. Oromoo laalchiseetiis dhugaadhaa dargiin ummata oromoo qilleensa irrattillee tahu, akka sabaati beekuudhaaf dirqamullee lafa isaa
(oromiyaa) beekuudhaaf ammoo osoo hudhamuuti kufa ka’insa hinqabne kufuu mudate.
Seenaa empaayera kanaa keeysatti juuzni biraa guddaan jijjiirama mootummaa kan bara 1991 hoggaa tahu hunda dura ammoo geeddarama mootummaa malee geeddarama sirna siyaasaa akka hintahin jala muramuudha qaba. Haatahu malee sabni oromoo kan gaafa dargii qilleensa irratti beekkamuu ture mootumma kana jalatti lafti isaatiis OROMIYAA ja’amtee seeraan beekkamuu dandeeyseeti jirti. Kuniis gumaata mootummaan kun oromoof arjoome osoo hintahin bu’aa dhiiga gootota orommoti.
Lafti oromiyaa akka waliigalaatti seeraan beekkamtee daangawuun waan tokko tahee, mootummaan mooteeqorkeen kun rakkoollee tokko tokko uumuuf ykn habaqaaluuf tattaafachuun isaa ammoo hinoolamne. Fakkeenyaaf daangaa sabaa fii sablammootaa kanneen oromiyaa daandeysan hunda irratti jechuun nidandayamaa, bakka takka takkatti ona (aanaa) tokko tokko, baka gariitti ammaas araddaalee hedduu abboommee laguudhaan akka Oromiyaa waliin gaafii daangaa keeysa galan taasisaati as afe. Kanneen keeysaahiif magaalota akka Dirree Dhawaa, Harar, Jijjiga, Moyyaaleefii Awaash faa maqaa dhahuun nidandayama. Bifa kanaan naannoo hundaan lafa Oromyaa kottoonfachiisuun shira mootummaa kanaa kan fuulduraas Oromoo fii sabaa sablammoota walgalaafachiisuuf karoorfamee bal’inaan itti hojjatamaa jiru hoggaa tahu tooftaan biraa ammaas tan magaalaa finfinnee irratti xiyyeefatte tana tahuu isiiti.
Maggaalaan Finfinnee hundeeyfamuma isii irraa kaaftee kan bu’uramte akkuma magaalota biraa kanneen Oromiyaa keeysatti arkaman hundaatti qubsuma weerartootaa hoggaa taatu barreeysitoota seenaa birattiis magaalota batalaa ykn mishigii ja’amaniiti beekkaman. Kana jechuuniis bara weerara miniliik keeysa lafa nafxanyootni ummata naannawaa humnaan buqqaasanii qubatan hoggaa tahan lakkuma qubsumti tun babal’achaa deemtuuniis magaalawaa deemuu isaanii caalaa ummata Oromoo daran madditti dhiibaa akka dhufan qabeentaa ummata magaalotaa kanaa kan ammallee calaqqisu irraa hubachuun nidandayama.
Magaalaan finfinneetiis qubsuma miniliikii fii ashkaroota isaa taatee eega bu’uramtee as bara baraan babal’achaa dhufuun isii hangam takka ummata oromoo madditti dhiibaa akka dhufte shalaguun nama hindhibu. Kana jechuun magaalaan takka eega hundooyte hinguddtin jechuu akka hintahin osoo hindagatamin wayta bal’attu kana ammoo ummata naannawaa buqqaasuudha balaan isii. babal’atinsa magaalaa keeysattiis qubsumti naannawaa akka dhunfatamtu kanuma eeggamu tahullee, warra buqqa’u san kafaltii gayaa kennuudhaan osoo raaw’atamee dandamata ture. Mootummaan wayyaanee jalqabuma irraahuu lafti kan mootummaati je’ee seeruun isaa saamichuma lafaa kanaaf ifqopheeysuu isaa akka tahe hubachuun nidandayama. Wayta magaalaan finfinnee babal’attu qotee bulaa naannawaa hiyyummaaf saaxiluu daran abbootiin qabeenyaa kanneen lafa tana horataniis galtuu alagaa tahuu isaaniiti balaan lamadaa. Akkaataa kanaan wayta magaalaan tun lafa dabalachaa babal’attu hunda oromoo qofa osoo hintahin oromummaaniis waliin haxaawamtee akka madditti bahaa deemtuus dagatamuu hinqabu. Fakkeenyaaf magaalaa finfinnee tan handhura oromiyaa tiifii maqaafillee tahu galma mootummaa oromiyaa taate tana keeysatii afaan hujii afaan amaaraa hoggaa tahu magaalota amma ammatamuuf deeman kanneen akka laga xaafoo keeysattiis guyyaa bulchiinsa finfinnee jala kufan irraa jalqabee afaan oromoo afaan hujii fii barnootaa tahuun akka hafu irra daddeebinee sodaachuutu nurraa eeggama. Magaalaan finfinnee duriis tahe arraa fii boruus handhura oromiyaa tahuun isii hafuu baattullee, hamma dhunfata oromiyaa jala ooltee oromo oromoo shurufkooytutti ammoo addis ababaan godaannisa gabrummaati wanni jennuufiis tanaafi.
Guddinni finfinnee kan oromoo madditti dhiibaa adeemsifamu kun galmi isaa lakkuma deemuun gama kaabaatiin naannoo amaaraatiin fii gama kibbaatiin ammaas naannoo ummatoota kibbaatiin waliin tuquudhaan oromiyaa amma jirtu tana baka lamatti fottoysuu irratti kan xiyyeefate taachaa shalaguuniis gamnummaadha. Gaafas kutaa walloo kan amma naannoo amaaraa jalatti buluu wajjiin oromiyaa guddittii takka tahuun hafee oromiyaa xixiqqoo sadihiifii sanii ol uumuuf akka yaaddamaa jiruus hubachuun nidandayama. Kuniis bulchiinsa qofa osoohintahin ilaalcha sammuu tiifii sabboonummaa oromootiis qoqqooduu fii darachiisuuf akka tahe shalaguun nama hindhibu.
Walumaagalatti shira mootummaan habashaa dhufaa fii dabraan saganteeyfatee saba kanaan oggolchuuf tattaafatuuf oromoon yoomiyyuu taanaan duuyda shiireysee bitamee hinbeeku. Lolli walloo, kan arsiitii fii calanqootiis kanuma mirkaneeysa. Fincilli barattoota oromoo kan amma masrer planii wayyaannee kana mormuudhaan qabsiifamees ittifufa diddaa abrummaa kan oromoon bara baraan gaggeeysaa ture hoggaa tahu wareegamtootni fincila kanaatiis gootota yoomiyyuu seenaan faarsuu akka taham ragaa bahuun barbaada.
Gaazexeysaa fii kitaabsaa
20 Cam, 2014, California USA